Sakafo ara-tsakafo - fitsaboana
Ny fanaraha-maso ara-tsakafo dia mizara roa sosona:
Afafazo amin'ny vokatra misy poizina.
Ny toxoinfection nify.
Ho an'ny vokatra misy poizina dia tsy ahitana ireo izay nivoaka ny daty fialan-tsasatra - tamin'ny voalohany dia vokatra mampidi-doza misy poizina sy vovon-tsolika mampidi-doza. Anisan'ireny karazan-tsakafo ireny ny karazana holatra sy ny voankazo ary koa ny zavamaniry sy ny masomboly.
Ny vokatra izay miteraka toxoinfection dia ireo izay mihinana sakafo mahazatra, saingy niharatsy noho ny tsy fahampian-tsakafo na ny fiainana an-taonany, ary nanjary loharanon'ny poizina sy ny taolam-paty.
Matetika ny olona no mahalala hoe inona no tsy azo sakafoana ny voankazo, holatra ary zavamaniry, ary noho izany antony izany dia ny voka-bidy voalohany dia tena tsy fahita firy. Matetika matetika no mihinana sakafo ny olona iray noho ny tsy fahamendrehany sy ny tsy fanekena azy, izay vokatr'izany dia mitarika ho amin'ny poizina.
Karazana fitsaboana sakafo misy poizina amin'ny ankizy
Ny fitsaboana ny poizina amin'ny zaza dia tsy misy fahasamihafana amin'ny fitsaboana aretina mitovy amin'ny olon-dehibe: ny hany fahasamihafana dia ny fihetsika haingana kokoa amin'ny tovovavy noho ny lanjany kely: ny fifantohana amin'ny vatana noho izany antony izany dia ambony.
Noho izany, ny fanehoana ny poizina amin'ny zaza dia mety henjana bebe kokoa.
Voalohany indrindra, mila manombana ny toe-pahasalaman'ny marary kely ianao: raha marary kely izy, tsy mandany mihinana ary mangataka rano fanampiny, dia tsy ilaina ny miantso dokotera na fiara mpamonjy voina. Ampy tsara ny manome rano betsaka (farafahakeliny 1 litatra), izay ilana vola kely manganese. Izany dia hisoroka ny tsy fahampian-drano sy hampihena ny fiposahan'ny reflexa.
Rehefa voadio ny vavony, dia mila manome ny saribao hikirakana isaky ny adiny 3 isaky ny 1 litatra isaky ny 1 kg. Ny entona karba dia afaka manolo ireo sorbents hafa (enterosgel, liferan, arina fotsy, sns.).
Fanafody misy vokatra vita amin'ny tavoahangy - fitsaboana
Alohan'ny handehanana ny poizina amin'ny vokatra avy amin'ny vokatra, dia mila mamaritra ianao raha misy poizina na aretina.
Rehefa misy poizina enina ora 6 aorian'ny sakafo, dia manomboka ny aretim-pivalanana, manomboka ny alahelo ao amin'ny kibo ary manomboka ny boka.
Izany dia fihetsika ara-dalàna sy ara-boajanahin'ny vatana ho toy ny fomba hanadiovana amin'ny poizina manimba, noho izany dia tsy ilaina ny manakana ny dingana toy izany: ny tanjon'ny fitsaboana dia ny hanamora ny fanadiovana.
Mba hanaovana izany, misotro rano be (farafahakeliny 1L), dia miteraka reflexa sy manadio ny vavony. Ny fampihenana ny dingan'ny fanadiovana ny tsinay dia mampiasa sorbents, izay manaisotra poizina. Zava-dehibe ny manao haingana ireo fepetra, mba tsy hiditra ao anaty ra ny toaka. Ireo fitsipika tsotra ireo dia ampiasaina mba hanapahana ny poizina amin'ny alàlan'ny fividianana fandevenana: ity vokatra ity dia mihamitombo haingana amin'ny hafanana avo, ka amin'ny fahavaratra dia tokony hofidiana amin'ny fampitandremana.
Fikarakarana ny trondro misy poizina
Ny fanararaotana amin'ny trondro, toy ny hena na holatra, dia manondro ny mafy indrindra. Noho izany, ny fandanjana ny fikarakarana ny tena amin'ny trondro natono dia tsy mendrika izany.
Ho an'ity karazana gripa ity, dia ireto no soritr'aretina:
Fihetsiketsehana sy hafanam-po.
Fahanginana sy fanaintainana any amin'ny tempoly.
Mitombo ny mari-pahaizana amin'ny vatana.
Alohan'ny hahatongavan'ny ambulance, mila manomboka ny fitsaboana ianao: misotro rano be loatra ary mamporisika ny fery. Tokony atao izany haingana araka izay tratra izany mba tsy hanohy hanapoizina ny vatana ny poizina. Mba hanadiovana ny tsinainy (ary ilaina izany, satria ny zavatra ilaina sy ny voka-dratsiny dia voatery miditra ao amin'ny ra araka izay azo atao), dia tsy maintsy misotro labozia na misorata.
Rehefa tonga ny dokotera dia hosazina ny hopitaly ary hanome fanampiana mahomby amin'ny hopitaly: mety amin'ny fampiasana ny gidro.
Fanafody famonoana ny holatra
Ny poizina lehibe indrindra mety hitranga (tsy manisa poizina manokana) dia manapoizina ny holatra. Amin'ity tranga ity, ny vokatra azo tsapain-tanana dia mahazatra amin'ny fahatarana mitady fanampiana, ary noho izany ny zavatra voalohany tokony atao rehefa voampanga amin'ny poizina amin'ny holatra dia ny miantso fiara mpamonjy voina.
Amin'izany fotoana izany, ny marary dia tokony hisotro rano betsaka miaraka amin'ny fanampin'ny manganese ary miteraka ranomafana. Rehefa avy nodiovina ny vavony, dia mila misotro labozia be dia be ianao.
Raha vao tonga ny fiantohana fiara dia hoentina any amin'ny hopitaly ny marary ary miankina amin'ny Hatao amin'ny toeram-pitsaboana izy na amin'ny fitsaboana intensive.
Fikarakarana ny famonoana amin'ny nofo
Ny fitsaboana ny voapoizina amin'ny hena dia tsy misy fahasamihafana amin'ny fitsaboana ireo karazam-panafody hafa sy ny fizotrany: manombantombana ny toe-pahasalaman'ny olona, ​​ary miantso ny fiara mpamonjy voina, na handray andraikitra amin'ny fitsaboana azy ireo. Avy eo, na ahoana na ahoana, ny marary dia misotro rano be dia be, miteraka ny riaka ary mamafa ny vavony mandra-pidiany amin'ny sakafo. Aorian'izany, misy olona iray misotro labiera maro isan-karazany isaky ny 2-3 ora alohan'ny hahatonga azy ho mora kokoa.
Ny vaksinin'ny pneumococcale
Fitsaboana iombonana - fomba fitsaboana manerantany, zava-mahadomelina ary fikarakarana tokantrano
Hatsangana ny leptine hormona - inona no hevitr'izany?
Nahoana no maizina ny maso?
Ny fitsaboana ny arthritis rheumatoid - fanafody vaovao vaovao
Fanaintainana anaphylaktika - soritr'aretina
Mihinàna alohan'ny fampiharana
Fitaovana fitiliana - fampiofanana mahomby
Kaya Gerber sy Irina Sheik dia lasa blondes
Ny hehy amin'ny sofina dia ny antony
Fanandramana ho an'ny zana-posy
Taylor Swift dia nampitombo ny "fahadimy"
Fanafody ho an'ny fanodikodinana
Designers for boys
Fangatahana fitafiana ho an'ireo vehivavy feno halavirana
Gel of Indovazin